عبدالعزيز ابيب محمود, Los Angeles, CA (2022)
waxaad Noogu soo hagaagaysaa warar xaqiiqada kusalaynsan oo dhexdhexaad ah
Waanu taageersanahay cabudhinta ay dawladda Itoobiya ka waddo waqooyiga dalka: Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi
Addis Ababa, November 29, 2011 (FBC) Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa sheegay inay taageerayaan ciidamada Itoobiya ee hawlgallada ka wada gobollada Waqooyi ee dalka Itoobiya.
Madaxweynaha ayaa Xafiiskiisa ku qaabilay Madaxa Xukuumadda Dowlad Deegaanka Soomaalida Mustafe Muxumed Cumar.
Waxa kale oo uu ka hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa xidhiidhka ganacsi ee u dhexeeya Somaliland iyo Itoobiya iyo sidii loo heli lahaa barwaaqo guud.
Intii uu socday kulanka waxa uu Mustafe uga warbixiyay weftiga arrimo la xidhiidha nabadda gobolka iyo dalka aynu jaarka nahay ee Somaliland.
Waxa kale oo uu sheegay in dadka Geeska Afrika ay leeyihiin masiir guud oo ay iyagu ka tashadaan.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhankiisa yiri “waxaanu muujineynaa sida aan u taageersanahay gumaadka ay dowladda Itoobiya ka wado waqooyiga dalkaasi.
Waxa uu sheegay in dekedda Berbera ay si hufan ugu adeegayso Itoobiya tan iyo markii la dhisay balaadhinta lagama maarmaanka ah ee Imaaraadka Carabta. Sida ay sheegayaan wararka laga helayo dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin ballaarinta xiriirka ganacsi ee labada dhinac.
U dhaqaaq dhanka h**e!
Si aad u hesho warar cusub, casriyeyn iyo macluumaad dhammaystiran
Facebook qabso- https://www.facebook.com/fanabroadcasting
Twitter: https://twitter.com/fanatelevision Naga raac Twitter.
Soo noqnoqota: Waad ku mahadsan tahay inaad nagu soo biirtay!
Imaaraadka oo taageero ciidan siinaya Itoobiya.
Caawa Addis sababa way haawan nayaa food h**e ayuu si iski ah uistaagay gaadiidkii isga gooshayay magaalada kadib markii magaalada lagu arkay baaburta ciidamada militariga oo raxan raxan udhex socota
warar soo baxaya oo aan wali si rasmi ah loo xaqiijinin ayaa sheea inuu dhacay caawa isku day Afgambi siduu warku nagu soo gaadhay taliye kuxigeen militariga itoobiya ayaa kadan beeyay ayay Général Tadasse
DEGDEG :- Weriye Cabdicaziiz Afrika ayaa u geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray Qarax loogu xirey gaarigiisa.
Afrika oo Afka kula dagaali jirey Alshabaab ayaa caawa ku baxay qarax loogu xirey gaarigiisa sida ay xaqiijiyeen rag ay shaqo wadaag yihiin.
markale iyo maqale
Dowlada mareykanka ayaa u digtay Pilot yada diyaaradaha inay halis ugu jiraan lidka diyaaradaha markay kasoo dagayaan ama ka kacayaan Airportka Bole ee Addis ababa.
Taliyihii ciidamada gaarka ah ee Benishangul,Edoso iyo hoggaamin kale oo Deegankaas ka tirsan ayaa la xidhay,walow aan si rasmi ah loo shaacinin sababta ka dambaysa xadhigooda haddana waxaa gobalka Metekel ee Benishangul marar baddan ka dhacay weeraro la sheegay in lagu beegsaday dadka Axmarada ah ee degan.
Kenya Ayaaba Ku Baashaalaysa Xabashiidi ilma Xayle Selaase Oo Xataa Xadka Ka Xidhatay
Midowga Yurub ayaa ka deyriyey xaalka Itoobiya, waxay sheegeen in bilo lagu guuldareystay xabad joojin in lasameeyo, Falaagada & Xukuumadda ABIY ayay sheegeen in ay dhagaha ka fureysteen Wada hadalka rasmiga ah, taasna ay soo dadajinayso in ay Itoobiya noqoto dawlado-yar yar oo Mandiqada kuwada yaala. Maalin kahor Hogaamiyaha Tigrey iyo Afhayeenkiisa waxay qireen Afti-dadweyne, Duqa Addis Ababa ayaa iyana tiri Iska taga! Xiisaddu ma dhawa sida muuqata UK ayaa ciidan u dirtay Addis Ababa si daadgureyn u sameeyaan dadkooda ah sida ay tabisay warbaahinta THE SUN TIMES.
Dawlada UK ayaa boqolaalan askarteeda gaarka utababaran kudiyaarisay wadanka kenya kuwaaso lasheegay in ay my aadiniintoda kacaawin doonan sidii ay addis ababa iyo ethiopia iyagoo nabad qaba ugasoo bixi lahaayen
Arintan ayaa muujinaysa in axmaaradii iyo epp ishortaagen in addis ababa laga qaxo kolba iyagoo geed lugta kumaranaya
Aan isla dhimano weeye xaaladu
ADANECH- TIGREEGU HADAY RABAAN INAY DAL NOQDAN HA GO'AN YAA KA HORTAGAN?
FARIIN ADAG IGA DHEH‼️😁
Mayorka magaalda Addis Ababa marwo Adanech Abiebie, ayaa caawa fariin adag Hawada u marisay shacabka Tigreega!🤔
Maxaad naga qasaysan hadaad rabtaan in aad Dalka ka go'daan aayar maad idinka oo nidaam Sharciya umaraya goosataan?
Qodobka ka midka ah dasturkii aad samaysten Ku dhaqaaqa, takale maxay tahay sababta aad Gu'itaankiina ugu xidhaysaan ciidankaan Duminaynaa Iyo Itoobiyaanu duminaynaa?!
Sidaad ugaga baxdeen xisbiga, si lamid ah ayad Itoobiya ugaga goosan kartaan oo ma jirto cid iddiinka hor-istaagi karta ee waydinkaa‼️😂
DEBRESION: "ADISS ABABA INAAN MAAMULNO MA RABNO,WADA HADAL MARKASTA DIYAAR AYAAN U NAHAY".
Hoggaamiyaha kooxda Tplf,Debretsion oo warbaahinta la hadlayay ayaa yidhi:
"Hawshan hadda socota midii h**e ee xilligii 1983 way ka duwan tahay,Addiss-Ababa inaan maamulno uma tagayno.Ajandhayaal baddan ayaa hadda na horyaalla,shacabka Tigreegu inay aayahooda ka tashadaan(Referendum), oo ay iyagu go'aanka gaadhan ayaan rabnaa.Wixii dhibaato soo gaadhay in laga xisaabtamo ayaan rabnaa"
"Xoog wax laguma maquunin karo,waan arragnay middaas.Waxkasta awood laguma xallin karo ayaan horay u aaminsanayn,haddana siddoo kale xal siyaasaded in loo baahan yahay ayaan aaminsanahay.Hal maalin xitaa haddii ay Dawladda dhexe u hadhsan tahay,waxaan udiyaarsanahay wadda haddal."
Boqor Cismaan Buurmadow ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. Isagoo ka mid noqon doona madaxda dhaqanka ee ka shaqeyn doonta Arrimaha doorashada Soomaaliya, gaar ahaan Golaha Shacabka.
ሰላም እንዲወርድ ህወሓት ከያዛቸው ቦታዎች መውጣት እንዳለበት መንግሥት ገለጸ - BBC News አማርኛ
Af-hayeenka wasarada Arrimaha dibada ee 🇪🇹 Ambassador Dina Mufri Ayaa sadex shurudood Ku xidhay wahadal ay Dawladiisu la gasho TPLF‼️
1. In TPLF ka baxdo deganada canfarta& amxarda
2. In ay aqoonsato dawlada federalka ah
3. In ay joojiyaan dhamaan dagaalada werarka ah.
አንድ ዓመት ያስቆጠረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ቆሞ ሰላም እንዲወርድ ከተፈለገ ህወሓት ከአማራ እና አፋር ክልሎች መውጣት አለበት ሲሉ የውጪ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲ...
Degdeg:TPLF ayaa sheegatay in ay saaka subaxnimadii soo rideen diyaarad nooca qumaatiga u kaca ee MI-35 oo ay leeyihiin Ciidamada Militariga Itoobiya.
Getachew Reda ayaa sheegay in ay diyaaradda kusoo rideen duleedka Magaalada Mile oo dagaal xooggani ka socdo hada.
Dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay maanta duqeyn ka gaysatay qaybo ka mid ah gobolka Waqooyiga Itoobiya ee Tigray-ga, iyadoo bartilmaameedsatay goobo lagu tababaro ciidamada TPLF, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee FANA.
Sidoo kale, waxaa la duqeeyay goob muhiim ah oo ku taalla xuduudka gobollada Wollo iyo Affar.
Wasiirkii difaaca ee dalka afkaanistaan oo camerada iska qarinaya isagoo hor fadhiya xero qoxooti oo kutaala gobolka Virginia ee dalka USA.
Xuquuda sawirka All Jazeera.
Fanaankii maanta nabada ka dhawaaqay goobtii dagaalka lagu abaabayey ee Aduunka Tariku #Dista-Gina ayaa la xidhay.
Dowlada ayaa maalmahan wada baabul ay rabto in shacabku dagaalka ka qeyb qaato, difaacana magaaloyinka ay dagan yihiin.
Ergayga midawga Africa u qaabilsan bariga Africa h**eyna usoo noqday Madaxweynaha Nigeria General Olusegun Obasanjo ayaa waxyar kahor ka dagtay magaalada Mekelle ee degaanka Tigree.
Warbaahinta caalamka ayaa sheegaysa inuu wado isku daygii ugu dambeeyey ee dagaal lagaga baajin karo gudaha magaalada Addis ababa, uuna kala soo hadlayo hogaaminta Tigree xabad joojin uu ogol yahay Kornayl Abiy oo haatan diyaar u ah inuu fuliyo dhammaan shuruudihii ay ku xidheen xabad joojinta Tigreegu.
Dowlada UK ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan Ethiopia, waxii ku sugana ugu baaqday inay kasoo baxeen inta diyaaradaha shacabka aan la joojin.
Wasaarada arimaha dibada ayaa sheegtay in dhawrka maalmood ee soo aadan ay suuragal tahay in la joojiyo diyaaradaha kasoo baxaya Ethiopia, xaalkuna kasii dari karo, sidaa darteed ay qasab tahay inay hada ka baxaan.
Waxii asalkoodu Tigree yahay ayeey si gooniya uga dagtay inay u safraan meel Ethiopia kamida, ayakoo sheegay in dowladu ay si gooniya u ugaadhsanayso.
Israel ayaa shaqaalaheedii kala baxaysa Ethiopia.. dhamaan dadkeeda ayeey ugu baaqeen degdeg inay uga baxaan Ethiopia.
Israel waa mid kamida wadamada Ethiopia sxbka dhaw la. Ah.
WAR DEG DEGA.
Marayakan ayaa amar ku bixiyay inay Itoobiya kasoo baxaan diblomaasiyinta aan muhiimka ahayn.
Jabhada hubaysan ee Oromada OLA, ayaa beenisay in khilaaf soo dhex gallay isbahaysigii ay la galleen Tplf.Waxayna sheegen in wararka noocas ah lagu qaraniyo guuldaroyin soo gaadhay Dawladda dhexe.
Xoggaha kalle ee lagw hellayo ilo-xog ogaalla ayaa tibaaxaya in maalmahan wada haddalo u socdeen labadan dhinac ee TPLF iyo OLA,arrimaha ay ka wada hadleen waxa kamid gallitan-ka Oromiya iyo Addiss-Ababa,waxayna jabhada OLA ka diyaar garobayaan siddii uusan is-bahaysigan u noqon lahayn mid lagu guurro,siddii xiligii horre jabhadii Oromada ay Tplf ugu guurtay.(Xilligi ay tallada dalka qasbanayen Tplf)
Xoggaha hordhaca ayaa sheegaya inay isku afgarteen qodobada baddi.
Twitterka ayaa ciwanadodii ka xidhay laba qof oo kamid ah kuwa barraha bulshada Dawladda dhexe ka taagera,(Areya iyo Seyum teshome).
Twitterka ayaa dul saaray calaamad digniin ah oy ku qoratn tahay (qoraalkani waa Abusive) baaqii Kornayl Abiy ee uu shacabka ugu baaqayey inay hubka qaatan oo xoogaga Tigreega aasan.
Twitter ayaa sheegay inay kasoo horjeedo xeerkooda balse ay u daayeen inay public interest tahay, hoos ka fiiri qoraalka.
Facebook ayaa ayaku tirtiray dhawr qoraal oo uu bartiisa soo dhigay Kornayl Abiy.
Dowlada Kornayl Abiy oo dhanka Ciidanka lagaga xoog batay, ayaa xooga saaraysa dhanka social media iyo kicinta shacabka, ayadoo rajo ka qabta in kacdoonkii 2018 ee Oromada oo kale ay ku kiciso xoogaga TDF sidaana lagaga adkaado.
Ma u suurtagalaysaa?
Sawirka labaad oo xoogaga TDF & OLF oo wada cuntaynaya.
Be the first to know and let us send you an email when عبدالعزيز ابيب محمود posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
isha kuhay halkan
Madaxweyniii deegaanka,hogaankii nabad galyada, janankii ciidanka, shacabku waxay leeyihiin gobol gaara ayay awoodii gacanta ugashay maxaad kaleedahay
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Oo Qaabiley Hordhaca Wufuuda Ka Qaybgalaysa Furitaanka Ballaadhinta Wejiga koowaad ee Dekeda Berbera.
Caloosha waxaan karabo
Masar iyo suudaan oo dhoolatus milatari sameeyey kaas oo loogu magac daray gorgorka webiga nile
Tigreegu sidii ay ulaayeen saraakiil amxaaro ah
Cabdiraxmaan Cabdishakuur " Doorasho Aan Lagu qanacsaneyn Muqdisho K**a Dhaceyso Taas anaa Kuu Balan Qaadaya " la soco Habeen dambe 9:00 PM Geeska Africa
Qarax ka dhacay Itoobiya, Gantaalo lagu garaacay Ereteriya iyo Wararkii ugu danbeeyay dagaalka ka socda Itoobiya
ITOOBIYA Taliyaha ciiddamada cirka Itoobiya, Yilma Merdasa oo maalmo kahor warbaahinta la hadlayay ayaa yidhi
Soomaali diid 🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴
DHALINYARADA FANQIL EE DEEGAANKA TIGREEGA AYAA SHEEGAY IN XISBIGA TPLF UU SHACABKA KA QAAADO LACAGO QASAB OO AY DAGAAL KU ABAABULAYAAN .
intii ladhaqdaa hadhow la dhargaa
Xildhibaan Islow Ducaale"Xalay ayaan ka war helnay inay gudoonka ku mashquulsanyihiin inay yiraahdaan Xukuumada way dhacday. waxaan niri Gudoomiye aan wada hadalno aan wada fariisano wuu ka dhaga adeygay kadibna Ajande aan waxba ka jirin buu soo qoray". I
Xildhibaan Islow Ducaale"Xalay ayaan ka war helnay inay gudoonka ku mashquulsanyihiin inay yiraahdaan Xukuumada way dhacday. waxaan niri Gudoomiye aan wada hadalno aan wada fariisano wuu ka dhaga adeygay kadibna Ajande aan waxba ka jirin buu soo qoray". Isagoo sii hadlaya ayuu yiri" Guddoomiyaha iyo ku xigeenkiisu waa Qaran Dumis,dalkaan doorashuu aadaa waqtigeedayna ku dhacee"
Halkani waa shashamane Waa xaafada Axmaarada meeshan sidan loo gubay, gaar ahaan waxaa leh kaniisada Orthodoxka Axmaarada ee xagjirbimadu kasoo burqato. Waxay meeshu u eekaatay xalab suriya subxaanallaah
Sawirka dadku meelahaas wadwadaan maahan abdi mohamuud omer oo jeel kujira ee waa xiligii doorashada isaga oo meesha uu kasoo jeedo codkiisa ka dhiibanaya dagmada qabridahar
Sawirka dadku meelahaas wadwadaan maahan abdi mohamuud omer oo jeel kujira ee waa xiligii doorashada isaga oo meesha uu kasoo jeedo codkiisa ka dhiibanaya ee degmada qabridahar
Soomaaliya Waan Kusoo Qaldanay. Diyaarad Yar Oo Kuwa Dalxiiska Ah Eyna Kireystaan Dadka Maal Qabeenada Ah Oo Laga Lahaa Yurub Maxaa Ku Dhacay Markeey Hawada Soomaaliya Kusoo Gashay Si Kibir Ah.
#follow saar pageka si aad uhesho waxa aan soo galino Soomaaliya Waan Kusoo Qaldanay. Diyaarad Yar Oo Kuwa Dalxiiska Ah Eyna Kireystaan Dadka Maal Qabeenada Ah Oo Laga Lahaa Yurub Maxaa Ku Dhacay Markeey Hawada Soomaaliya Kusoo Gashay Si Kibir Ah.
Saxaafada caalamka oo aad uhadalhaysa ethiopia
Sooraan iyo jawaan dhibaatoyinka musuqa
Muuqaalkaan Heestaan waxa lagu duubay Taliska 21-aad Ciidamada Xoogga Dalka ee Magalada Dhusamareb 1986 26 june Leyla Cabdulahi Cumar waxa ay kamid aheyd hoboladi Horseed ee Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyed gaar ahaan qeybta 21-aad,
Maxay tahay sababta ay Jamhuuriyadda somaliland u xirtay xafiiska telefishinka Universal uu ku lahaa magaalada hargeysa? Wasiirka warfaafinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa kawaramaya.
Maxay tahay sababta ay Jamhuuriyadda somaliland u xirtay xafiiska telefishinka Universal uu ku lahaa magaalada hargeysa? Wasiirka warfaafinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaan ka waraysannay.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabbuuti oo diraya dhambaalka maalinta xornimda dalkaas ee 27-ka Juun.
Dadka qaarkiis ayaa aaminsanaa in aan ku fashilmeyno dhaqan gelinta iyo ka miro dhalinta Olalaha Isxilqaan, iyaga oo aaminsanaa in aysan dadkeennu waxba dhisan karin haddii aynan helin gacan shisheeye. Biyo sacabadaada ayaa lagaga dhergaa, wax innagu ayna
Mohamed Abdullahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyada federalka somalia ayaa bartiisa facebook sidan kusoo qoray Dadka qaarkiis ayaa aaminsanaa in aan ku fashilmeyno dhaqan gelinta iyo ka miro dhalinta Olalaha Isxilqaan, iyaga oo aaminsanaa in aysan dadkeennu waxba dhisan karin haddii aynan helin gacan shisheeye. Biyo sacabadaada ayaa lagaga dhergaa, wax innagu aynaan qabsan shisheeye inooma qabanayo.
Taliyoo ha tegin, taliyoo ha tegin. Waxay dad badan soo xusuusisay. “ Caynaanka haay, haay” iyo “Waynahaan ka tuugnee noo waar”. Tan hal natiijo oo keli ah ayey leedahay. وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا
Abdirahman Abdishakur Warsame ayaa bartiisa face book soo dhigay qoraalkan hoose iyo vediogaba Taliyoo ha tegin, taliyoo ha tegin. Waxay dad badan soo xusuusisay. “ Caynaanka haay, haay” iyo “Waynahaan ka tuugnee noo waar”. Tan hal natiijo oo keli ah ayey leedahay. وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا
Siyaasiyiinti Qawmiyada Oromada ee shalay la xidhay ayaa loo gaystey Jirdil iyo dhaawacyo. -Sawir si hoose xabsiga looga soo qaadey Jawar Mohamed ayaa dhaawac madaxa ahi ka nuuqdaa, sidoo kale Bekele Gebra ayaa la sheegay inuu dhaawac soo gaadhey. -Fanaankii la dilay ee rabshaduhu ka kaceen walaalkii ayaa asna maanta la dilay halka Aabihii dhaawac soo gaadhey, ehelka fanaanka ayaa la sheegaya in dhawaacyo soo gaadheen ayakoo ku sugnaa magaalada Ambo oy kasoo jeedaan. -Qawmiyada Axmaarada oo sida la sheegay xasuuq loogu gaystey Deegaanka Oromada ayaa ayakuna maanta isu soo bax ku qabtey caasimada deegaankooda ee Bahradaar maanta, isu soo baxa ayeey kusoo bandhigeen calankii Dergiga iyo Xayle Salase ee boqortooyadii Axmaarada. Waxay si aad ah u dhaliilasanaayeen gubidii taaladii Xayle salaase iyo waxa ka socda deegaanka Oromada. -Shacabka Oromada ee kacdoonka wada ayaa la wareegay dhawr magaalo oo deegaanka Oromada kamid ah, waxay ooda ka qaadeen maxaabiistii xabsi yada kujirtey. Sidoo kale Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in magaalada Shashabane lagu diley dad 100 gaadhaya oo Axmaaro ah lana gubay ganacsiyo ay ku lahaayeen magaaladas. Isku soo duub oo xaalka Ethiopia cirka ayuu isku sii shareeray ayadoo Wali khadkii internetku wadanka ka maqan yahay, sidoo kale gabi ahaan wadanku bandaw yahay oo diyaaradihii xataa la joojiyey.
Waxaan hadda idiin xaqiijin kara in uu madaxwayne mustafe ku suganyahay magaalada Asmara Ee dalka Eritrea Wuxuu u jooga gogol xaadhida wada hadalka dhexmari doona Ethiopia iyo ONLF
Shacab si nabad ah u mudaharradayay Magaalaada Arba Minch Ee ku taal gobolka shucuubta koonfureed Aya xabad nool loo adeegsaday Dhawaac badan ayaa jira Shacabkan waxay kasoo horjeedeen oromada oo intan danbe wadday barakicin iyo dilal ay kula kacayaan dadka kale Ee aan oromada Ahayn Waxa kalo xusid mudan in ay mudaharaado xoogan oo Oromada lagagasoo hor jeedo ka socdaan magaalada Addis ababa Wixi kaso kordha xaalada Ethiopia kala soco Halkan